सावधान ! घरको भित्ता तथा टेबुलमा प्रयोग हुने रङ्गीचङ्गी रंङले हुनसक्छ क्यान्सर – Etajakhabar
सावधान ! घरको भित्ता तथा टेबुलमा प्रयोग हुने रङ्गीचङ्गी रंङले हुनसक्छ क्यान्सर
काठमाडौँ – के तपाईंले घर तथा कोठा चिटिक्क सजाउन भित्तामा प्रयोग गर्नुभएको रङ्गीचङ्गी रंङको नकारात्मक असरबारे सोच्नुभएको छ, त्यस्ता नकारात्मक असरबाट बचेर मात्र भित्ता सजाउनुहोस् अन्यथा आफ्ना बालबालिका क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको सिकार हुन सक्छन् ।
विशेषगरी भित्ता तथा टेबुलमा प्रयोग हुने विभिन्न रङ्गीचङ्गी रंङमा लेड (सिसा)को मात्रा प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
घर तथा विद्यालयको कक्षाकोठामा प्रयोग हुने ती सिसाका कण हावाका माध्यमबाट स–साना बालबालिकाको शरीरभित्र सजिलै प्रवेश पाउँछ र दीर्घकालमा क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको सिकार हुन सक्छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक ०६, २०७४ समय: ८:२७:५३